विश्वका धनी खेलाडीको सूची : सय नम्बरमा कोहली, पहिलो-दोश्रो को ? « Janata Samachar
विश्वका धनी खेलाडीको सूची : सय नम्बरमा कोहली, पहिलो-दोश्रो को ?
प्रकाशित मिति : 12 June, 2019 2:41 pm
काठमाडौं । भारतीय क्रिकेट टीमका कप्तान विराट कोहली संसारकै सर्वाधिक कमाई गर्ने खेलाडीको सूचीमा सामेल भएका भारतका एकमात्र खेलाडी हुन् ।
अमेरिकी पत्रिका फोर्ब्सले सार्वजनिक गरेको धेरै आम्दानी गर्ने खेलाडीहरुको सूचीमा उनको नाम सयौं स्थानमा छ । गतवर्षभन्दा कोहलीले १७ स्थान तल झरेका हुन् । सूचीको पहिलो स्थाननमा अर्जेन्टिनाका फुटबल खेलाडी लियोनल मेस्सी पहिलो स्थानमा छन् ।
अमेरिकी पत्रिका फोर्ब्सले जारी गरेको सूची अनुसार विराट कोहलीले यो वर्ष ५० लाख डलर कमाई गर्दै सूचीको १ सयौं स्थानमा छन् । अघिल्लो वर्ष कोहलीले २ करोड ५० लाख डलर कमाई गर्दै ८३औं स्थानमा थिए ।
मेस्सी विश्वको सबैभन्दा धेरै कमाई गर्ने खेलाडीको सूचीमा पहिलो नम्बरमा छन् । उनले यसभन्दा अघिको सबैभन्दा बढी कमाई गर्ने रेस्लर फ्लायड मेवेदरलाई शीर्ष स्थानबाट हटाउँदै पहिलो स्थानमा पुग्न सफल भएका हुन् ।
उनको वार्षिक कमाई १२ करोड ७० लाख डलर छ । मेस्सी पछि पोर्चुगलका फुटबलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो विश्वको सबैभन्दा धेरै कमाई गर्ने खेलाडी हुन् । उनको वार्षिक कमाई १० करोड ९० लाख डलर रहेको फोर्ब्सको सूचीमा उल्लेख छ ।
अछाम । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) अछामले पार्टी एकिकरणको कामलाई टुंगोमा पुर्याएको छ । बुधबार
सैन्य शिविरमा बम आक्रमण हुँदा एकको मृत्यु, ५० गम्भीर घाइते
अफगानिस्तान । पूर्वी प्रान्त पर्वानमा रहेको अमेरिकी र नेटो सैन्य शिविरमा बम आक्रमण हुँदा एकको
नेप्सेमा दोहोरो अकंको वृद्धि
काठमाडौं । धितोपत्र बजारमा शेयर कारोवार मापक नेप्से परिसूचक दोहोरो अंकले वृद्धि भएको छ ।